192.168.8.100 - Admin Login - Adeegsade Magac iyo Furaha ereyga
192.168.8.100 waa Cinwaan IP Shaqsiyeed oo loogu talagalay oo keliya isticmaalka gudaha Shabakad Gaar ah. Cinwaankan waxaa adeegsada modemka, router-yada, iyo aalado kale oo aan tiro lahayn. Waxaad isku dayeysaa inaad soo iibsato soo galitaanka router-ka? Waxaad joogtaa meeshii saxda ahayd.
192.168.8.100 Soo gal
Cinwaan IP shaqsiyeed ayaa loo qoondeeyay qalab ku dhex jira shabakadaha xiran & si xor ah looma heli karo si looga ugaarsado internetka. Si loo fududeeyo baahinta cinwaanada IP-da ee gudaha ururada & shabakadaha, cinwaano shaqsiyadeed ayaa la sameeyay. Way ka fududdahay in la aqoonsado cinwaanka IP-ga ee shakhsiyadeed iyada oo la caddaynayo xaaladda dhabta ah.
Maamulka RW PWs ee 192.168.8.100 & 192.168.8.100 Soo galida IP waa cinwaan IP ah oo ay router-yada sida Linksys & network badan ay uga dhigaan marin ama marin marin. Ururraduhu waxay ku dhisayaan marin-hayaha maamulka cinwaanka cinwaanka si ay u oggolaadaan maareeyayaasha shabakaddu inay abaabulaan shabakaddooda iyo sidoo kale router-yada. Gaar ahaan qofku wuxuu xamili karaa Fursadaha Amniga, DNS, wakiil, IP QoS, LAN, dejinta WLAN, Maareynta Shabakada, DSLMAC, ADSL, WAN, WPS block; iyo kuwo kale.
Sidee si sahal ah loogu gala 192.168.8.100?
Iyada oo 192.168.8.100 Cinwaanka IP-ga ayaa marin u hela Maamulkaaga Router kaas oo kuu oggolaan kara inaad dib u eegto qaabeynta iyo dejimaha ay soo bandhigaan softiweerka router.
Guji 192.168.8.100 ama qor 192.168.8.100 barta cinwaanka biraawsarkaaga.
Haddii tani aysan guuleysan, markaa 192.168.8.100 maahan cinwaankaaga IP-ga router. Ka dib markaad aqoonsato cinwaanka IP-ga router-ka, ku soo bandhig cinwaankaaga biraawsarkaaga URL. Waxaa lagu geeyay guddiga galitaanka isticmaalaha. Halkan ku soo bandhig adeegsadahaaga router & PW.
Haddii aadan dib u xasuusan magacaaga isticmaale & PW waxaad u hogaansameysaa amarradan si aad dib ugu hesho. Haddii aadan dib-u-habeyn ku sameynin default PWs & isticmaale taas oo la socota router-ka waa inaad tixraacdaa lambarka sirta ah ee router-ka & liiska isticmaalayaasha. Kadib markaad kujirto dariiqa maamulka ee router-yada waxaad awood u yeelan doontaa inaad wax ka bedesho & bedesho goob kasta oo internet ah.
Haddii aad la kulantid dhibaatooyin soo kabashada router-kaaga 192.168.8.100 (oo aan la dhigin ama la dheereynin culeyska), shabakadaha ayaa adeegsan kara cinwaan cusub oo sawir ah 10.0.0.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1. Xaaladda noocaas ah ka fiiri cinwaanka liiska router IP.
Haddii aad leedahay shabakad guri oo aad leedahay taleefan casri ah, PC desktop, kiniin iyo laptop. Iyadoo loo marayo router-ka dhexe qalabkan dhammaantood waxay ku xirayaan internetka. Meel qalab gaar ah oo shabakadda ah oo loo qoondeeyay cinwaanka IP-ga dadweynaha, dadweynaha loo xilsaaray IP Address in aad isticmaali doonto waxaa loo qoondeeyay router-ka.
Ruter waxaa loo qoondeyn karaa cinwaanka IP-ga ee dadweynaha, hase yeeshe markaa wuxuu u qaybinayaa cinwaan gaar ah kan Hab-dhiska DHCP dhammaan qalabka shabakadda. Qalabka shabakadaada ayaa isu gudbin doona midba midka kale adoo adeegsanaya cinwaankooda IP-ga ah, & router-ku wuxuu adeegsan karaa cinwaanka IP-ga ee dadweynaha si loo fududeeyo isdhexgalka internetka. Intaad ku xireyso internetka, cinwaanadaada IP-gaaga ah ayaa qarsoodi noqon doona, oo kaliya cinwaanka IP-ga dadweynaha ee router ayaa la ogaan karaa.
Waayo, 192.168.8.100 IP caddaynta baafinta waa kombiyuutarka la soo saaray. Cinwaanka Borotokoolka Internetka ee qalabka wuxuu ilaaliyaa qeexitaan ku habboon Cinwaanka Borotokoolka IPv4.